16,294,384 unique visits
Read More · 0 Comments · 4160 Reads
· Maxaad ka taqaanaa Wadamada ay u kala dhasheen Saraakiishii Ajnabiga ahaa ee weerarkii UNDP lagu dilay?
Waxay warar dheeraad ah ka soo baxayaan Wadamada ay u kala dhasheen Saraakiishii Ajnabiga, ee Wasiirka Arrimaha Gudaha, uu xaqiijiyay in maanta lagu dilay weerarkii hubeysnaa ee Dhismaha Xarunta UNDP lagu qaaday.
Laacib on June 19 2013 20:53:46 ·
Read More · 0 Comments · 609 Reads
· Raa'isal Wasaaraha oo ka hadlay weerarkii maanta lagu qaaday Xarunta UNDP ee Magaalada Muqdisho
Ra�iisul Wasaaraha Xukuumadda Federaalka Soomaaliya mudane Cabdi Faarax Shirdoon "Saacid", ayaa si kulul u cambaareyey qaraxii ka dhacay maanta xarunta QM ay ku leedahay Muqdisho.
Galkacal on June 19 2013 17:59:00 ·
Read More · 0 Comments · 438 Reads
· Nicholas Kay oo si kulul uga hadlay weerarka lagu ekeeyay Dhismaha Xarunta UNDP
Nicholas Kay ayaa wuxuu si kulul u sheegay in weerarkaan uu ahaa fal wuxuushnimo leh, oo lagu doonaayo in lagu carqaladeeyo sida uu hadalka u dhigay nabadda Somaliya.
Galkacal on June 19 2013 17:50:50 ·
Read More · 0 Comments · 810 Reads
· Daawo Sawirada: Weerarkii qorsheysnaa ee maanta lagu qaaday Xarunta UNDP
Weerarkaan oo ahaa mid abaabulan ayaa waxay Xoogaga Shabaab sheegteen inay kula wareegeen Dhismaha Xarunta, iyagoo sheegay in muddo ay gacanta ku hayeen kontoroolka Xaruntaasi.
Galkacal on June 19 2013 17:11:51 ·
Read More · 0 Comments · 3591 Reads
· Gudoomiyaha Baarlamaanka oo sheegay in weerarkii Xarunta UNDP aanu saameyn doonin
Gudoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya Prof. Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari, ayaa wuxuu galabta ka hadlay weerarkii qorsheysnaa, ee barqanimadii maanta lagu qaaday Xarunta UNDP ee Magaalada Muqdisho.
Galkacal on June 19 2013 16:53:11 ·
Read More · 0 Comments · 450 Reads
· DEG DEG: Wasiirka Arrimaha Gudaha oo sheegay in 8 Saraakiil oo Ajnabi iyo Soomaaliba lagu dilay weerarka UNDP
Wasiirka Wasaarada Arrimaha Gudaha ahna Amniga Qaranka ee Xukuumada C/kariin Xuseen Guuleed, ayaa wuxuu goor dhaw uu si rasmi ah uu u cadeeyay khasaaraha weerarkaan ka soo gaaray, xubnaha ka hawlgala UNDP.
Shiil on June 19 2013 14:59:38 ·
Read More · 0 Comments · 4189 Reads
· Wararkii ugu dambeeyay khasaaraha ka dhashay weerarka UNDP & Wasiirka Arrimaha Gudaha oo gaaray
Waxay warar dheeraad ah ka soo baxayaan khasaaraha ka dhashay, weerarka hubeysan ee maanta lagu qaaday Xarunta Qaramada Midoobe UNDP, ee ku lee dahay Magaalada Muqdisho.
Shiil on June 19 2013 14:26:38 ·
Read More · 0 Comments · 2525 Reads
· Saraakiisha Dowladda oo sheegay inay soo gaba gabeeyeen hawlgalkii dib loogu qabanaayay Xarunta UNDP
Saraakiisha Dowladda Soomaaliya ayaa waxay sheegeen inay soo gaba gabeeyeen hawlgalkii dib loogu qabanaayay gacan ku heynta Xarunta Hay�adda UNDP ee Magaalada Muqdisho.
Shiil on June 19 2013 13:58:21 ·
Read More · 0 Comments · 1539 Reads
· Xoogaga Shabaab oo sheegtay inay iyagu ka dambeeyeen weerarka Xarunta UNDP
Xoogaga Shabaab ayaa waxay sheegteen Masuuliyada weerarka hubeysan ee maanta lagu qaaday Xarunta Hay�adda UNDP ee Magaalada Muqdisho.
New York on June 19 2013 13:30:03 ·
Read More · 0 Comments · 1475 Reads
· DEG DEG: Ciidamada Dowladda oo la wareegay gacan ku heynta Xarunta UNDP iyo diyaarado dul heehaabaaya
Ciidamada Dowladda Soomaaliya ayaa waxay si rasmi ah ay ula wareegeen gacan ku heynta Xarunta UNDP, kadib weerar muddo laba saacadood qaatay oo maanta lagu ekeeyay.
New York on June 19 2013 13:06:38 ·
Read More · 0 Comments · 3292 Reads
· Ciidamada Alpha Group oo gudaha u galay Xarunta la weeraray iyo qaraxyo laga maqlay
Ciidamada Alpha Group ee Dowladda, ayaa waxaa u suura gashay inay gudaha ugu daataan Xarunta Hay�adda UNDP ee Magaalada Muqdisho, oo weerar culus lagu ekeeyay.
New York on June 19 2013 12:59:16 ·
Read More · 0 Comments · 2098 Reads
· Raggii weeraray Xarunta UNDP oo laga saari la�yahay Dhismaha Xarunta, oo ay gudaha ugu jiraan
Rag hubeysan ayaa waxay maanta weerar qorsheysan ay ku ekeeyeen Xarunta Hay�adda UNDP ee Magaalada Muqdisho, iyadoo ay gudaha ugu jiraan raggaan.
New York on June 19 2013 12:34:20 ·
Read More · 0 Comments · 2758 Reads
· WAR DEG DEG: Qarax xoog badan oo gil gilay Bartamaha Magaalada Muqdisho
Qarax aan si sax ah loo aqoon waxa dhabta ah ee dhaliyay, ayaa wuxuu goor dhaw uu gil gilay Bartamaha Magaalada Caasimada ah ee Muqdisho.
New York on June 19 2013 11:53:02 ·
Read More · 0 Comments · 2362 Reads
· Guddiga arimaha Diinta Baarlamaanka oo ka digay burburinta dugsiyada Qur�aanka Muqdisho
Xilli howlgalada bur-burinta goobaha sharcidarada ugu dhisan hareeraha wadooyinka Magaalada Muqdisho uu maamulka Gobalka Banaadir waayahan ka waday Muqdisho ayaa arintaasi waxa ay saameyn ku yeelatay qaar kamid ah dugsi qur�aanada ku yaala Magaalada.
Rashka on June 19 2013 09:01:48 ·
Read More · 0 Comments · 849 Reads
· Xukuumadda oo qaban qaabinaysa shir ammaanka dalka wax looga qabanayo
Wasaarada arimaha gudaha iyo ammaanka qaranka Xukuumadda Soomaaliya ayaa shaacisay inay qaban qaabinayso shirweyne qaran oo looga hadlayo arimaha ammaanka dalka.
Rashka on June 19 2013 08:40:28 ·
Read More · 0 Comments · 445 Reads
· Maxamed Buule �Yaasiin Raadeer kooxdiisa ayaa dhaawacday�
Saraakiisha ciidanka Dowladda Soomaaliya ee Gobalada Jubbooyinka ayaa ka hadlay xaaladaha Magaalada Kismaayo iyo dhaawacii Yaasiin Raadeer oo shalay lagu dhaawacay Magaalada Kismaayo.
Rashka on June 19 2013 08:21:37 ·
Read More · 0 Comments · 1592 Reads
· Generaal C/laahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo ka hadlay dhaawaca Yaasiin Raadeer
Generaal C/laahi Sheekh Ismaaciil Fartaag oo sheegta inuu yahay madaxweyne ku xigeenka maamulka Axmed Madoobe ee Magalaada Kismaayo ayaa ka hadlay dhaawacii loo geestay Yaasiin Raadeer oo ahaa sarkaal ka tirsan maamulka Axmed Madoobe.
Rashka on June 19 2013 08:02:36 ·
Read More · 0 Comments · 1939 Reads
· Degmada Xamarweyne oo aan dhaq-dhaqaaq ka jirin,ciidamada Amisom iyo kuwa Dowladda oo gaadiidka dagaalka wadooyinka ku xiray Degmada Xamarweyne ee Gobalka Banaadir ayaa saaka kala xiran,iyadoo wadooyinka gala Degmadaasi ay yaalaan gaadiidka dagaalka ciidanka oo ku go�an.
Rashka on June 19 2013 07:48:59 ·
Read More · 0 Comments · 1055 Reads
· Xubno ka socda Baarlamaanka Somaliya oo ka qeyb galay shirka ACP, muddo 20 sano kadib + SAWIRRO
Wafdi ka socda Baarlamaanka Federaalka Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay bur burkii kadib ka qeybgalay ACP-EU oo ka furmay magaalada Brussels ee xarunta Midowga Yurub.
Laacib on June 18 2013 22:58:14 ·
Read More · 0 Comments · 1238 Reads
· Sarkaal ka tirsan Militariga iyo laba kamid ah Ciidamada Nabad Suggida oo lagu dilay Magaalada Muqdisho
Rag hubeysan ayaa waxay galabta siyaabooyin kala duwan ay u dileen Sarkaal ka tirsan Militariga iyo laba askari oo kamid ah Ciidamada Hay�adda Nabad Suggida ee Qaranka.
Galkacal on June 18 2013 21:31:07 ·
Read More · 0 Comments · 2115 Reads
· Page 1 of 789: 1234...789